Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-alumina wire guide tube China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Textile Ceramics > I-General Textile Ceramics > Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-alumina wire guide tube
I-Model No.: JH.CT.07
Silokhu sibhekene nokuhlukunyezwa kwezingubo ze-textile ze-ceramic iminyaka eminingi, ikakhulukazi izinto ezisetshenzisiwe esisetshenziselwa zihlanganisa ubukhulu be-alumina, i-zirconium oxide ne-titanium oxide.
Siphelile ukwakha ububanzi obuhlukahlukene obuhlukahlukene be-tube yochungechunge yoceramic wire kusuka kwesayizi encane kuya emikhulu. Ngaphandle kwalokho, singenza inqubo yokupholisa ukunciphisa ukuxubana okuqhubekayo, kufaka phakathi ukupholisa ngaphakathi nangaphakathi.
Siye sanikeza ezinye izinto eziningi ze-textile ceramic futhi, njenge-ceramic eyelet guide, umhlahlandlela we-ceramic roller, umhlahlandlela we-ceramic, umhlahlandlela we-ceramic pigtail, ubhondi we-ceramic, induku ka-ceramic, ipulangwe ye-ceramic njalonjalo. Asigcini nje kuphela ukuhlinzeka okungaphezulu kwamakhulu wezinto ezijwayelekile, kodwa futhi sibhekene nokuhlukunyezwa kwenkambiso yocingo yoceramic eyenziwe ngokwezifiso njengomdwebo wamakhasimende ngamunye.
Uma ukhona esiteji sokuvikela, noma uqale ukukhiqiza kwakho ngezwi eliphakeme, sizokuthola isisombululo esihle kuwe.
I-Ceramic Wire Guide Yesiqondiso
I-Tube Yesikhwama Sekhamera Epholile I-Ceramic
I-Ceramic Thread Guide Guide
I-Ceramic Guide Pin Yokudayiswa